चालक हुन् त यस्ता ! जसले फिर्ता गरे भ्यानमा छुटेको १३ लाख – ईमेची डटकम
चालक हुन् त यस्ता ! जसले फिर्ता गरे भ्यानमा छुटेको १३ लाख
Posted byइमेची संवाददाता October 21, 2019 December 10, 2019 Leaveacomment on चालक हुन् त यस्ता ! जसले फिर्ता गरे भ्यानमा छुटेको १३ लाख
इमेची डटकम । ४ कात्तिक, चितवन (भरतपुर) :
भरतपुरमा म्याजिक भ्यान चलाउँदै आएक एक जना चालकले सवारीमा छुटेको यात्रुको नगदसहितको ब्याग सम्बन्धित धनीलाई बुझाएका छन् ।
चालक कालिका नगरपालिका ३ का २२ वर्षीय सुरेस गुरुङले भरतपुर ८ की ६२ वर्षीय सुमित्रा राणाको नगद १३ लाख रुपैँया सहितको ब्याग बुझाएका हुन् । आइतबार दिउँसो पौने तीन बजेको समयमा सहिदचोकबाट हाकिमचोकतर्फ गइरहेको ना १ ज ७९०१ नम्बरको म्याजिकमा एउटा कालो रङको लेडिज ब्याग छुटेको थियो । उक्त ब्याग भरतपुर ८ की ६२ वर्षीया सुमित्रा राणाले प्यासिन्जर सिटमा राखेकै ठाँउमा बिर्सिएर छाडेकी थिइन् ।
सोही समयमा म्याजिकमा यात्रारत अर्का यात्रु झापा भद्रपुर ८ का २२ वर्षीय निरन्जन भट्टराईले छुटेको ब्याग देखेपछि म्याजिक चालक गुरुङलाई जानकारी गराए । म्याजिक चालक गुरुङ र यात्रु भट्टराई उक्त ब्याग लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको सम्पर्कमा पुगे । प्रहरी नायब उपरीक्षक सालिकराम पौडेलको रोहवरमा ब्याग खोलेर हेर्दा नगद १३ लाख रुपैँया, एउटा मोबाईल र अन्य सामान फेला परेको थियो । त्यसपछि सम्बन्धित धनीलाई बोलाएर नगद र मोबाईलसहितको झोला जिम्मा लगाइएको थियो ।
इमान्दार व्यक्तिहरुका कारण आफुले हराइसकेको नगद पाएको भन्दै सुमित्राले म्याजिकका चालक र यात्रुलाई धन्यवाद दिएकी थिईन् । खुसी हुँदै सुमित्राले भनिन्, ‘सबै मानिस इमान्दार हुने हो भने कोही पनि दुःखी हुनु पर्ने थिएन ।’
Posted byइमेची संवाददाता October 21, 2019 December 10, 2019 Posted inब्यानर न्यूज
यी हुन् पाल्पा रामपुरका गमिलकुमार श्रेष्ठ, जसले भारत पाकिस्तानको युद्धमा आफ्नो ज्यान गुमाए